Hargeysa: Muwaadiniin reer Somaliland ah oo Lacag ugu deeqay Muj. Lixle Hooyadii | Somaliland.Org
July 29, 2009	Hargeysa (Somaliland.Org)- Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud (Aadan Siiro), ayaa shalay deeq lacageed oo dhan $1,223 (Kun laba boqol iyo saddex iyo labaatan doolar) guddoonsiiyey Muj. Maxamed Xaaji Diiriye (Lixle) hooyadii oo xannuun u jiifta cusbitaalka Manhal ee magaalada Hargeysa, iyada oo xaaladeeda caafimaad iyo daryeelkeeduba liito.
Deeqdan lacagta ah ee la guddoonsiiyey Ardo Diiriye Madar oo ah Muj. Lixle hooyadii oo ay soo direen muwaadiniin reer Somaliland ah oo ku nool magaalada London ee carriga Ingiriiska, isla markaana uu wakiil ka ahaa Maxamed Cali Cismaan, ayaa munasibadii lagu guddoonsiiyey oo ka dhacday qol ku yaala Cusbitaalka Manhal oo ay caafimaad ahaan u jiifto, waxa ka soo qaybgalay Md. Axmed Maxamed Diiriye (Nacnac), Md. Maxamed Nuur Carraale (Duur) iyo xubno ka tirsan qoyska Muj. Lixle oo uu ka mid yahay wiil uu dhalay oo lagu magacaabo Cabdicasiis Maxamed Xaaji Diiriye (Lixle).
Sheekh Aadan Siiro oo isaga oo dhinac kaga fadhiya sariirta cusbitaalka ee ay hooyadan daranyeysan ee halyeyga qaaliga ah dhashay ku jiifto, ayaa ugu horayn waxa uu u mahad naqay dadka reer Somaliland ee deeqdan lacagta ah soo gaadhsiiyey si loogu geeyo qoyska Lixle, wxaaanu sheegay in Muj. LIXLE uu ka mid yahay dadka tirada yar ee dhifta ah ee ummada reer Somaliland ku dhaadato, waxaanu xusay in ay ayaan daro tahay in dadkii noocaas ahaa ee udub dhexaadka u ahaa taariikhda dalka la iloobay.
“Waxaan runtii dareemayaa in la dayacay Muj. Lixle iyo ehelkiisii, ummad walibana waxay leedahay taariikh ay ku dhaadato, dadkii taariikhda ku lahaa Somaliland, waxa ka mid ahaa Muj. Lixle iyo rag badan oo qayrkii ah oo dalka u soo halgamay, naftoodii iyo maalkoodiina u huray, rubtiina waad arkaysaan in Lixle hooyadii maanta jiifto Cusbitaalka Manhal, iyada oo daranyeysan,” ayuu yidhi Sheekh Aadan Siiro.
Waxaanu bulshada reer Somaliland iyo ganacsatadaba, gudaha iyo dibada meelkasta oo ay joogaan u soo gurmadaan Muj. Lixle Hooyadii iyo dhammaanba mujaahidiinta qaaliga ah ee xorayntii dalka u soo halgamay ee maanta ku dhex daranyaysan dalkii ay u soo halgameen, isaga oo sheegay in taakulaynta muslimiinta iyo dadka walaalaha ahi aakhiro iyo adduunkaba anfac leedahay.
Waxa isaguna halkaa ka hadlay Md. Axmed Maxamed Diiriye (Nacnac) oo faahfaahin ka bixiyey lacago kala duwan oo jaaliyadaha reer Somaliland ugu deeqeen Muj. Lixle hooyadii, taasi oo loogu talo galay in marka hore loo dhiso guri hanti ah oo ay hooyadan iyo qoyska leeyihiin, kaasi oo uu sheegay in dhismihiisa dhawaan la bilaabi doono, balse marka hore lagu talo jiro in la baxnaaniyo xaalada caafimaad ee mujaahidka hooyadii oo haatan jiifta cusbitaalka Manhal.
Md. Maxamed Nuur Carraale (Duur) oo isaguna halkaa ka hadlay, ayaa sheegay in markii taariikhada dalku khaldan tahay ay dhacday in dadkii dalka ugu mudnaa ee taariikhda ku lahaa xagga hoose maraan, halka dad aan ehel u ahayn, taariikhna ku lahayn dalku ay mansabka sare joogaan, waxaanu xusay in dadkii taariikhda lahaa ay dayaceen inta maanta qaranka u shaqaysa, maadaama oo ay maamulkii dalka dhaxal u heleen cid aan waxba ka ogayn halgankii loo soo maray xornimada.
Waxayna dadkii iyo masuuliyiintii cusbitaalka ku booday Muj. Lixle hooyadii ugu duceeyeen in Illaahay caafimaad siiyo, kana dul qaado xannuunka iyo silica wehelka u noqday ee ay maanta sariir yaalka u tahay.